Kuwedzera kwekutarisirwa kunobhadharwa kugadzirwa kwembatatisi muUzbekistan - "Potato System" magazini
kuru Nhau dzenyika Asia
Mbatatisi ndeimwe yezvirimwa zvakakosha zveUzbekistan. Panguva imwecheteyo, inokodzera kutariswa kubva pakuona kwekuvandudzwa kwebhizimusi rezvekurima. Seminar "Tekinoroji inokura tekinoroji" yakaitirwa mudunhu reBustanlik mudunhu reTashkent yakapihwa kumusoro uyu.
Yakanga yakarongedzwa nebazi rezvekurima reRepublic of Uzbekistan, iyo Association of Potato Varimi uye AGROVER LLC - mutungamiri wemusika mukugadzirwa kwechikafu (tafura) nembeu mbatatisi, kuchengetedza nekugadzirisa zvakakwana, Nuz.uz inoshuma.
Chokwadi uye tarisiro yekusimudzira mbatatisi inokura muUzbekistan
Anopfuura mamirioni makumi matatu nemakumi matatu nematanhatu ematani ematatata anogadzirwa munyika zana nemakumi matanhatu nenhatu. Uzbekistan inotora makumi maviri nematatu pakati penyika idzi. Vagadziri vakakura iChina, India, Russia, Ukraine, USA, Germany, Bangladesh, Poland, France neNetherlands.
Muna 2020, mamirioni 2,9 ematani ematatata akarimwa muUzbekistan mumapoka ese emapurazi munyika yese, ayo matani miriyoni imwe nemazana mashanu akawira mumapurazi nemabhizinesi ezvekurima.
“Muna 2021, zvakarongwa kudyara mbatatisi pahekita zviuru makumi masere neshanu neshanu, ayo mahekita zviuru makumi mashanu ane makumi manomwe nenomwe achadyarwa munzvimbo huru, 86,5 zviuru mahekita munzvimbo dzeminda yemichero neminda yemizambiringa uye makumi matatu nemaviri kunzvimbo dzechipiri, 50,7 zviuru mahekita , - akadaro mukuru wedhipatimendi rekusimudzira horticulture, viticulture, horticulture uye kurimwa kwembatatisi kwebazi rezvekurima Fakhriddin Kirgizboev. - Izvo zvakare zvakarongwa kukura 3 mamirioni ematani ezvigadzirwa nezvikamu zvese zvemapurazi (32 miriyoni matani - nemapurazi, mabhizinesi ezvekurima, matani emamiriyoni e8 nemapurazi edekhkan uye nezvakazvimirira zvega). Kuitira kuzadzikisa zvido zvevagari vematapiri uye kuchengetedza kugadzikana kwemitengo mumisika yepamba, varimi, madekhani uye vezvemabhizimusi vanopihwa rutsigiro rwakakwana mukudyara mbatatisi munzvimbo huru uye mumikoto yeminda yemichero neminda yemizambiringa. Iwo mapurazi anopihwa yakakwira kubereka mbatatisi mbeu. Tichifunga nezve ivhu uye mamiriro ekunze enharaunda yega yega, nekuda kwekudyara kwekutanga kwembeu dzakasarudzwa dzembatatisi uye kuiswa kwezviyero zveagrotechnical nenguva, nhasi kugadzikana kwemutengo mumusika kunoitika nekuda kwekukohwa uye kuendesa panguva chaiyo kwekutanga Kukohwa mbatatisi kumatunhu ekumaodzanyemba, ari muSurkhandarya uye Kashkadarya matunhu. Nezve kudiwa kwehuwandu hwevanhu hwembatatisi, kubva muna Chikumi uye mune mamwe matunhu ese, kupihwa kwembatatisi kwakagadzwa mumisika yepamba. Kudyara mbatatisi sembesa yekupedzisira kunotanga muna Chikumi munzvimbo dzakasunungurwa kubva pagorosi nezvimwe zvirimwa zvekutanga. Pamusoro pezvo, nyanzvi kubva kumabhizimusi ekurima uye nemasainzi anoronga masemina ekudyara mbatatisi munzvimbo dzinodzokororwa, kuita matanho ezvekurima, uye kurwisa zvirwere netumbuyu. "Basa rekutsanangudza riri kuitwa pane rakasarudzwa rakakodzera mhando, matanho eagrotechnical ari mumapurazi, uye kurudziro zvinopihwa zvichibva pavhu nemamiriro ekunze ematunhu."
State mutemo mumunda wembatatisi inokura
Parizvino, kuwanda kwekutarisirwa kunobhadharwa kugadzirwa kwemazambane muUzbekistan. Padanho rehurumende, mikana dzakasiyana siyana dziri kuvandudzwa nekuitwa, izvo zvinoita kuti zvikwanisike kuwedzera mikana iripo mukuita uye kutungamira mukugadzirisa indasitiri uye kusangana nezvinodiwa nevanhu zvembatatisi. Hurumende zvakare inobatsira mukusimudzirwa kwekugadzirwa kwembatatisi, kuiswa kwenzvimbo dzekuchengetedza pamwe nekugadzirisa kwakadzika, izvo zvinobvumidza kuumba imwe yecheni yakakosha.
Musi waMay 6, 2020, Kugadziriswa kweMutungamiriri weRepublic of Uzbekistan (Nha .PP-4704) yakagamuchirwa, yakanangana nekuwedzera kugadzirwa kwevatengi (tafura) nembeu mbatatisi uye kuzadzisa zvizere kudiwa kwemapatata mumusika wepamba. yeRepublic, kuwedzera masumbu uye nzira dzekushandira pamwe, kuunza matekinoroji emazuva ano mumunda wekurima mbatatisi. Sekureva kwesarudzo iyi, matunhu makumi mana akatarisana nekugadzirwa kwembatatisi, kunyanya, matunhu makumi maviri nematatu embeu mbatatisi, nematunhu mapfumbamwe ekuberekesa mbatatisi yembeu.
Munzvimbo idzi, masumbu masere anorima mbatatisi akagadzirwa, ayo akapiwa mahekita 8 epasi yekurima mbeu nevatengi mbatatisi, uye kurimwa kwembatatisi yemhando yepamusoro yekubereka yakasimbiswa.
Mumwe muenzaniso ndeye agro-maindasitiri-anokura masango eAgrover, akagadzirwa mudunhu reTashkent, iro rinopa cheni yese yekugadzirwa kwembatatisi kubva pambeu kusvika pakadzika kugadzirisa. Sumbu rinoshandisa matekinoroji emazuva ano nemidziyo kukwidziridza mashandiro ekugadzira, kushandisa zvine musoro uye zvine zvibereko ivhu nemvura zviwanikwa
"Nekuda kwekuunzwa kwefafisi yekudiridza sisitimu uye michina pamahekita mazana manomwe enzvimbo muna 700-2019, zvaikwanisika kuwana kusvika kumatani makumi mana kusvika makumi mana nemashanu ezvigadzirwa pahekita yenyika," anodaro Farkhod Takhirov, director weAgrover Agro -kusanganisa mbatatisi sumbu. - Tichifunga kuti mbatatisi inoda yakasarudzika yekuchengetedza uye mamiriro ezvinhu, kutariswa kwakasarudzika mukugadzirwa kwesumbu kunopihwa kuvandudzwa kwenzvimbo dzekuchengetedza dzemutengi nembeu mbatatari mumatura emazuva ano akafriji. Kuvhurwa kwenzvimbo inochengetwa agro-maindasitiri munzvimbo yeBustanlik kwakaita kuti zvikwanisike kuti sango redu riwedzere kugona kwekuchengetedza mbatatari panguva imwe chete kusvika pamatani zviuru makumi mashanu, uye kuwedzera kugona kwekugadzirisa kwekutanga (kurongedza, kuenzanisa uye kupaka) kusvika ku2020 matani paawa. "Zvese izvi zvinoita kuti zvikwanise kudzikisa zvakanyanya kurasikirwa kwembatatisi nekudzideredza, pamwe nekupa zvinhu zvepamusoro kubva kumunda kuenda kumutengi."
Iyo Bustanlik Potato Center (LLC JV "Bustanlik potatochilik markazi"), yakaverengerwa musumbu, yakagadzira kurimwa kwembeu mbatatisi yemichero yepamusoro munzvimbo dzakakosha. Iyo yegore kugadzirwa kwembeu mbatatari ingangoita zviuru zviuru makumi maviri.
Sayenzi nehunyanzvi mukugadzirwa kwekugadzirwa kwembatatisi
Nyika iri kushingairira kuvhura michina inosimudzira kubereka kwehutano mbeu mbatatisi. Nekudaro, mu-vitro marabhoritari akagadzirwa munzvimbo dzeTashkent, Samarkand, Namangan neKashkadarya, uko kugadzirwa kwembeu mbatatisi kwakagadzwa.
Uzbek-Hungarian Potato Center, pakati pemabasa makuru ekuzadza mhando dzembatatisi, yakavhurwa muna 2021 mune mutyairi AKIS Center yeAgriculture Knowledge, Innovation neMasevhisi, akagadzirwa nebazi rezvekurima reRepublic of Uzbekistan ne rutsigiro rweEuropean Union neWorld Bank sechikamu chekuzadzikiswa kweDziviriro Yezano rezvekurima reRepublic of Uzbekistan kusvika 2030 ”.
"Nhasi, masangano ekutsvagisa emunyika ari kushanda pakuunza matekinoroji ekurima uye emuno, semuenzaniso, anogadzira mhando dzembatatisi dzinokurumidza kukura, dzepakati pekuibva uye dzekukurumidza kuibva dzinoenderana nevhu remuno nemamiriro ekunze," akasimbisa nyanzvi iyi weDhipatimendi rezvirimwa uye mavise zvirimwa uye mbatatisi, dhipatimendi rekuvandudza horticulture, viticulture, horticulture uye kurimwa kwembatatisi kweBazi rezvekurima Teshaboev Bakhodir. - Kwakanyanya kutarisirwa kune kwavo kurwisa chirwere, kupisa uye kusanaya kwemvura. State Register yeZirimwa Zvirimwa zvinosanganisira 131 mitsva yematatisi inokurudzirwa kudyara mudunhu reRepublic of Uzbekistan, ayo 19 marudzi akagadzirwa nemasangano ekutsvagisa emuno. Kutsvagurudza kwenguva refu kwemasayendisiti pamwe nekudyidzana kwavo nevashandi vemuno nevekunze kunotungamira mukubudirira kwesainzi. "
Sekureva kweChirevo cheMutungamiriri weRepublic of Uzbekistan yomusi waFebruary 26, 2021 No. PP-5009, chirongwa chezviyero chakagadziriswa kuronga hukuru hwekugadzira mbatatisi, pamwe nemiriwo, mavise uye maronda muBustonlyk, Bulungur, Yangikurgan, Andijan, Altyaryk, Muzrobod, Mirzaobod matunhu. Iyo "Fund yekutsigira yezvemari yekutsvagisa kwesainzi uye zviitiko zvitsva, kuvandudzwa kwemhando dzakasiyana dzembatatisi uye kugadzirwa kwembeu dzembatatisi" zvakagadzirwa paSainzi Yekutsvagisa Institute yeMuriwo neMelon Zvirimwa nePatata.
Mhando itsva dzembatatisi dziri kugadzirwa pamwe chete neWorld Potato Center (CIP), uye kukosheswa kwakanyanya kunopihwa kurima mbatatisi kubva mumbeu dzebhodani. Kuti udzidze ruzivo rwekunze kwenyika, kudzidziswa uye kumberi kudzidziswa kwemasayendisiti uye nyanzvi mune dzimwe nyika, kuchinjana ruzivo uye kuita kwehunyanzvi hwekugadzira mukugadzira zvinopihwa.
Tags: mbatatisi inokuraUzbekistan